news2dago | Septambra 2008 | 2
[Ankapobeny ] 16 Septambra, 2008 05:08
Lasa i Rado Poeta! (updated)
T@ alahelo lehibe no nadrenesako t@ kiadaona maraina vao eo fa nodimandry i Rado. Very olomanga iray indray izany ny zavakanto malagasy. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakavina isika mpiblaogy. Manome fanampim-baovao eo ihany rehefa mahazo.
Alaivo eto ny hira misy ny sangan'asany
[Ankapobeny ] 12 Septambra, 2008 12:17
Aleo asina 2éme session indray ny Bacc e!
Miditra ny mpianatra sahirana ny ray aman-dreny @ fisondrotana etsy sy eroa. Eo koa ireo mbola sasamiandry ny lisitra fanampiny @ bac izay hivoaka ato ato. Maro tokoa mantsy hono ireo ankizy tokony ho afaka kanefa dia tsy afaka satria tsy tafiditra tao anaty solosaina ny naoty sasany noho ny tandrevaka teo @ ireo mpandika ny naoty ao anaty solosaina! Loza anie zany re olona e! ny ho avy ny mpianatra iray manontolo no simba @ izany zavatra izany. Ary eto aho dia te hisarika ny saintsika oe tsy aleo ve averina ihany ny fihodinana faharoa eo @ ity bac ity e. Efa maro rahateo ireo sekoly ambony tsy miankina mila mpianatra vaovao sady misy tena ampy fitaovana izy ireny no azo antoka fa tsy hisy fitokonana toy ny eny Ankatso.
Nivoaka teny Iavoloha androany maraina ihany koa ireo mpampianatra 2719 nahavita fihofanana sy fianarana ka teo ambany fiahin'ny Filoha no natao izao famoahana azy ireo izany. Semban-drahona ihany anefa ity lanonana ity satria dia nisy mpampianatra 8 mianadahy niara-doza tany Mahanoro omaly maraina satria dia nivadika ny fiara mazda nitondra azy ireo. Tsy nisy aina nafoy akory fa ny ratra no betsaka. Saika hamonjy ilay lanonana eny Iavoloha mantsy izy ireo.
Tsy totosa kosa ilay famoriana mpanao gazety saika ataon'ny ben'ny tanana omaly sy androany. Ny antony tsy nisin'ilay valan-dresaka aloha dia tsy mbola fantatra mihitsy satria iarahana mahalala fa tsy dia matotra tsara ara-politika ity Ranamana mitondra ny tanana ity ka tsy mahagaga raha mapiesona etsy sy eroa foana izy rehefa miteny. Hita tena goragora tokoa mantsy ny fitantanana ny tanana ankehitriny ary ny tsara rehetra vita teo aloha ary simba avokoa. Ny jiro rehetra manaingo ny lalana makeny @ anjelimainty etsy Anosy ohatra dia tapitra tsy nisy intsony. Ny etsy @ 13mai ihany koa dia torak'izany. Simba ny tanana izay no tena marina.
Farany dia nanomboka androany etsy @ lapan'ny kolontsaina etsy Mahamasina ny foara be mampiranty ny asa tanana sy vokatra avy any Egypta.
[Ankapobeny ] 09 Septambra, 2008 12:38
Any @ Réanimation ny Poeta Rado
Eny @ Homi nanomboka ny farany ny volana aogositra i Rado na Georges Andriamanantena! izay mpanoratra sy poeta malagasy anisan'ny sangany @ izao vanim-potoana izao. Mihombo anefa ny aretina mahazo azy ary tsy maintsy naiditra eny @ fameloman'aina izy. Marihina fa aretim-po no mahazo azy ary efa notsaboana tany ivelany izy t@ taon-dasa. Hanampy ny fianankavina moa ny fanjakana @ izay mety ho lany rehetra.
Betsaka kosa ny ho rava trano @ fanamboarana ilay lalambe mikondana na "autoroute" mampitohy an'Ankadimbahoaka sy Ivato ary mandalo iny lalana digue rehetra iny. Avy any Soazilandy tokoa mantsy ny filoha t@ farany herinandro teo ary rarakivy raha nahita ny fandrosoana eo @ io firenena kely atsy afrika atsimo io. Satria betsaka ny foton-drafitrasa any an-toerana. Koa inoana fa nampihetsika ny ambopo ny malagasy izany zavatra hitany tany izany.
[Ankapobeny ] 05 Septambra, 2008 07:51
Zoma mahafinaritra indray ny andro! maro be ireo fety aman-danonana ary hisongadina @ ireny ny hetsika atao eny @ eldorado Cabaret concert tsy hisy afa tsy glita no tendrena ao ary fampisehona farany ataon'i Eric Manana eto Madagasikara @ ity taona ity. Maro moa ny mpanakanto miaraka hilalao aminy @ io eo ry Johary, Rija Ramanantoanina sy ny maro hafa tsy voatanisako...
Manomboka androany koa ny Festival Angaredona ary handritra ny 10 andro eo ity hetsika ara-javakanto ity izay maimaipoana moa ny fanmpisehona ary etsy ambohijatovo ny seho no atao marobe koa ireo mpanakanto vao misondrotra handray anjara @ io. I Rajery moa no mikarakara ny hetsika...
Eo @ toetr'andro kosa dia efa manomboka mafana ny andro eto Andrenivohitra, efa manala tsikelikely ny akanjo mafana ny olona. Mivadibadika be ihany anefa izany toetr'andro izany indraindray mbola mamanala ihany @ hariva. Tsy mahagaga moa izany satria tena hita misy fiovana ny toetr'andro maneran-tany. Eo ohatra ny ranomandry nirotsaka tatsy Kenya izay nahagaga ireo mponina tany. Eo koany rivo-doza mahazo ny any Amerika izay mifanesisesy izay tsy izy. Voalaza moa fa efa fantatra avokoa ny anarana omena ny rivo-doza aty @ faritra misy antsika aty.
Mandeha be kosa ny fizarana ny laharana fiara ary tsikaritra fa mihatsara ny fiara mifamezivezy ankehitriny. Efa any @ litera ....TAL moa izao ny marika @ takelaby raha ny eto Antananarivo no resahana. Midika izany fa manam-bola ihany ny gasy.
Vaovao henoko tao @ kidaona maraina kosa dia nisy mpanala bac tsy afaka izany angaha toa hoe namono tena fa ny toerana misy azy aloha tsy henoko tsara.
[Ankapobeny ] 02 Septambra, 2008 09:56
Omeo sopapa a!
Kilalao kely atolotro ho anareo namana rehetra. Efa miandriandry ny vahiny kely moa izahay mivady ankehitriny ka ity misy fifaninana mba asaiko ataonareo!
Omeo fanampin'anarana oe ny zanako?
Fitsipika: Anarana malagasy, raha afaka manome ny dikany moa vao maika tsara!
Santionany mba tiako ohatra: Tsikisariaka, Ravakamalala, Mitia, Tokinao sns
Anarabositra kosa: Dadarabe, Pissoa, Maintikely sns
izay ary fa dia miandry ny tolotra avy aty @nareo